I-Raw Febuxostat powder (144060-53-7) hplc =98% | AASraw
I-febuxostat powder (144060-53-7)
/ iimveliso / IiReagents zeR & D / I-Febuxostat powder (144060-53-7)
SKU: 144060-53-7. Udidi: IiReagents zeR & D
I-AASraw inokusetyenziswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-mass order ye-Febuxostat powder (i-144060-53-7), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-febuxostat powder isetyenziselwa ukuphathwa gout. I-Gout ngumhlobo wesifo samathambo apho i-uric acid, into eyenziwa ngokwemvelo emzimbeni, eyakhayo kumalungu kwaye ibangele ukungena ngokukhawuleza kokubomvu, ukuvuvukala, intlungu, nokushisa kwelinye okanye amaninzi amaninzi. I-febuxostat powder ibonisa iklasi yeyeza ebizwa ngokuba yi-xanthine oxidase inhibitors.
Febuxostat powder ividiyo
I-Raw Febuxostat powder Abalinganiswa basisiseko
igama: I-febuxostat powder
I-molecular Formula: C16H16N2O3S
Isisindo somzimba: 316.37
I-Raw Febuxostat powder ekusebenziseni
Amagama eBrama: Uloric
Igama loGqirha: I-febuxostat powder (Igama elibiziweyo: fe BUX oh stat)
Ukusetyenziswa kweFowxostat powder
I-febuxostat powder yile mithi yonyango esetyenziselwa ukuthintela ukuhlasela kwe-gout. I-Gout luhlobo lwesifo se-arthritis apho uric acid iwakhiwa khona kumalungu kwaye ibangela ukuhlaselwa ngokukhawuleza kokubomvu, ukuvuvukala, intlungu, nokushisa kwelinye okanye amaninzi amaninzi. I-febuxostat powder yiyo yeqela leziyobisi ezibizwa nge-xanthine oxidase inhibitors. Isebenza ngokunciphisa inani le-uric acid eyenziwa emzimbeni.
I-febuxostat powder ifika kwifom yefomathi. Kuthatyathwa kanye ngosuku, kunye okanye ngaphandle kokutya.
Iziphumo eziqhelekileyo ezichaphazelekayo zibandakanya intlanzi kunye nentlungu edibeneyo.
I-febuxostat powder ingabangela utywala kunye nombono ophazamisayo. Musa ukuqhuba okanye usebenzise umatshini ogqithiseleyo uze wazi ukuba iPhebuxostat powder ikuchaphazela njani.
Yiyiphi imilinganiselo yeFexoxostat powder
Ukusetyenzwa koMntu oMdala kwiGout
I-dose yokuqala: 40 mg ngomlomo kanye ngosuku
- Ukuba izinga le-serum uric acid likhulu kune-6 mg / dL emva kweveki ze-2, ukwandisa umthamo kwi-80 mg ngomlomo kamini
Isondlo se-Maintenance: 40 kwi-80 mg ngomlomo omnye ngosuku
-Ukusetyenziswa kwesi sidakamizwa kufuneka kwenzeke emva kokuba i-gout flare ikhutshwe.
-Ukuhamba kweentyatyambo kungenzeka ngenxa yokunyusa ukunyuswa kwe-urate ukusuka kwiifom ephothiweyo, ingakumbi ngexesha lokuqalisa; i-gout flare prophylaxis kunye ne-non-steroidal anti-inflammatory okanye colchicine iyanconywa kwaye inokuba luncedo kwiinyanga ze-6.
Amanqanaba e-asidi angabhekiswa ngokukhawuleza emva kweeveki ze-2 emva kokuqala kwesi sidakamizwa.
Ukusetyenziswa: Ukuphathwa okungapheliyo kwe-hyperuricemia yesifo kwizigulane ezinegalelo
Ubunzima ukuya kwi-Renal Dysfunction (CrCl 30 ukuya kwi-89 mL / min) Akukho lungiso olusicetywayo.
I-DAL functional Dysfunction (CrCl 15 kwi-29 mL / min): Umthamo ophezulu wemihla ngemihla ngu-40 mg / ngosuku.
Ubunzima ukuya kwi-foverate Ingozi (Child-Pugh Class A kunye no-B): Akukho luhlengahlengiso olucetyiswayo.
Ubunzima bokusweleka kwesibindi (i-Child-Pugh Idilesi C): Sebenzisa ngokulumkisa.
-Izigulane eziphuhlisa amazinga e-ALT amakhulu kunamaxesha e-3 umda ophezulu oqhelekileyo (3 x ULN): Ukuphazamisa unyango; musa ukuqala ngaphandle kwesinye inkcazo ye-ALT engaqhelekanga.
-Izigulane ezakha ii-ALT amazinga angaphezu kwe-3 x ULN ne-bilirubin enkulu kune-2 x ULN: Unyango kufuneka uphelelwe kwaye ungabuyiselwa kwakhona kwizigulane ngaphandle kohlobo oluthile.
-Izigulane ezine-ALT ezincinane okanye iziphakamiso ze-bilirubin kunye nesinye isizathu esinokwenzeka: Sebenzisa ngokulumkisa.
Injongo ekujoliswe kuyo ukunciphisa nokugcina amanqanaba e-serum uric acid ngaphantsi kwe-6 mg / dL.
-Ukuba isigulane singagqibekanga kwisilinganisi se-serum uric acid esingaphantsi kwe-6 mg / dL emva kwe-2 kwiiveki ze-4, ukunyuka kwenyusa kuyafaneleka.
Umlinganiselo ophezulu: 80 mg / ngosuku
Ukusetyenziswa okuhambelanayo kunye ne-mercaptopurine / azathioprine kuyachithwa.
Indlela iPowbuxostat powder isebenza ngayo
I-febuxostat powder yeklasi yezilwanyana ezibizwa ngokuba yi-xanthine oxidase inhibitors. Iklasi leziyobisi liqela lamayeza asebenza ngendlela efanayo. La mayeza aqhelekileyo asetyenziswa ukuphatha izimo ezifanayo.
I-febuxostat powder iyanciphisa amanqanaba e-uric acid ngokuthintela i-xanthine oxidase. I-Xanthine oxidase yi-enzyme eyenza umzimba wakho wenze uric acid kwi-xanthine. Amanqanaba aphezulu e-uric acid egazini lakho angabangela igciwane.
Akufanele usebenzise le nyilisi ukuba unobungozi kwi-Febuxostat powder, okanye ukuba uphathwa nge-azathioprin (Azasan, Imuran), mercaptopurine (Purinethol), ortheophylline (Elixophyllin, TheoCap, Theochron, Uniphyl).
Ngaphambi kokuba uthathe i-Febuxostat powder, xela ugqirha wakho ukuba unesifo sentso, isifo sesibindi, isifo senhliziyo, umhlaza, i-Lesch-Nyhan syndrome, imbali yokuhlaselwa yintliziyo okanye isifo, okanye ukuba ufumene ukutshintshwa komzimba.
Unokunyuka kwimiqondiso yesifo somlilo xa uqale uthabathe iFebxoxostat powder. Ngezona ziphumo ezilungileyo, qhubeka uthabatha unyango njengoko uyalelwe. Ugqirha wakho unokuyalela amanye amayeza omhlaza ukuba usebenzise ngexesha lokuqala kweenyanga ze-6 unyango kunye neFebxostat powder.
Ukuze uqiniseke ukuba eli liyeza lisiza imeko yakho, igazi lakho lingafuneka lihlolwe rhoqo. Tyelela ugqirha wakho rhoqo.
I-Febuxostat Raw Powder
I-Febuxostat powder Marketing
Ngaba i-Febuxostat powder inayo nayiphi na imiphumo yangaphandle
Fumana uncedo lwezonyango lwexesha loxakeka ukuba unayo nayiphi na le miqondiso yempendulo yokukhusela: imihlathi; ukuphefumula; ukuvuvukala kobuso bakho, imilomo, ulwimi, okanye umqala.
Biza ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba unempembelelo engundoqo yecandelo elinjenge:
intlungu yesifuba okanye uvakalelo olunzima, intlungu esasazeka kwingalo okanye ehlombe, isisongela, isithukuthezi, isifo esiqhelekileyo;
ukuphazamiseka ngokukhawuleza okanye ubuthathaka, ngakumbi kwelinye icala lomzimba;
intloko, ngokudideka, iingxaki zombono, intetho, okanye ibhalansi; okanye
isicupunu, intlungu yesisu, i-fever ephansi, ukuphelelwa kwesidlo, umchamo omnyama, izitshixo zobumba, i-jaundice (ukuphuzila kwesikhumba okanye amehlo).
Iziphumo ezincinci ezibi ziquka:
intlungu, kunye nokuqina;
ukukhawuleza kwesikhumba; okanye
Indlela yokuthenga i-Febuxostat powder esuka kwi-AASraw
I-Febuxostat Raw Powder Recipes
Epacadostat (INCB024360) ipowder
I-ticagrelor powder (274693-27-5)
I-Entecavir i-hydrate powder